Google Developers Group ကိုစသိခဲ့တာ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်တုန်းက။ အဲတုန်းက ကျွန်တော် software development အကြောင်းကို ဘာမှကို နားမလည်သေးတဲ့ အချိန်ပေါ့။ Community Event တွေတက်ရင်းနဲ့ပဲ နည်းပညာနယ်ပယ်မှာ ကိုယ်လေးစားရတဲ့သူတွေကို တွေ့လာရတယ်။ သူတို့လိုအရမ်းဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် နည်းပညာကြောင်း သိလာတဲ့အချိန်မှာလည်း ကျွန်တော်လေးစားခဲ့တဲ့ ဆရာတွေလိုပဲ ကိုယ့် နည်းပညာအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် သိသလောက် မှတ်သလောက်လေးတွေ ပြန်မျှဝေပေးခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တက္ကသိုလ် နောက်ဆုံးနှစ်မှာ လုပ်တဲ့ DevFest မှာထင်တယ်၊ GDE လို့ခေါ်တဲ့ Google Developer Experts တွေနဲ့ စထိတွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်အဲ့မှာ GDE Programme ကိုစသိခဲ့ရတယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်နေရင်း၊ ကိုယ့်အသိုင်းအဝင်းကိုလည်း ပျိုးထောင်ပေးရင်း နိုင်ငံတကာကလည်း အသိအမှတ်ပြုခံရမယ်ဆိုတာက လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ အခွင့်အရေးပဲလို့ထင်တယ်။ ဒီလိုတွေးရင်း မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုနိုင်တဲ့ GDE တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့က ကျွန်တော့်အိပ်မက်တစ်ခု ဖြစ်လာတယ်။
GDE Programme ကိုမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်တော့ ကိုယ်ကကိုယ်လုပ်တဲ့ Google နည်းပညာကို ကျွမ်းကျင်ကြောင်း၊ ဒီနည်းပညာအကြောင်းကို ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ အမြဲမျှဝေနေတဲ့သူဖြစ်ကြောင်း (thought leader ဖြစ်ကြောင်း) Google ကနေပေးတဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှု recognition တစ်ခုပဲ။ အသေးစိတ်ကိုတော့ နောက်တစ်ခုထပ်ရေးပေးပါမယ်။
Are you doing this w0rk to facilitate growth or to become famous? What's more important? Giving or letting go?|
- Excerpt from Tao of Leadership by John Heider.
ကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက် လျှောက်တုန်းက ၂၀၁၈ မှာ။ အဲတုန်းက Iñaki Villar က ထောက်ခံချက်ပေးခဲ့တယ်။ (GDE Programme က ဝင်ဖို့ဆို GDE ဖြစ်ပြီးသားသူတစ်ယောက်ရဲ့ ထောက်ခံချက်လိုတယ်)။ ကျွန်တော် Form ဖြည့်ပြီးလျှောက်တော့ Interview အဆင့်တောင်မရောက်လိုက်ပဲ အီးမေးလ်နဲ့တင် ငြင်းခံရတယ်။
အဲတုန်းက လူကလည်း ငယ်သေးတော့ စိတ်ထဲတော်တော်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ Interview တောင်မရောက်ပဲ ငြင်းခံလိုက်ရတော့ ခံလည်းခံပြင်းတယ်။ အချိန်ကြာသွားတော့ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်လာတာက ဘယ်သူအသိအမှတ်မပြုမပြု ဘာဂရုစိုက်ရမှာလဲ။ ကိုယ်လုပ်နေတာကို ကိုယ်လိပ်ပြာလုံဖို့ပဲ လိုတယ် ဆိုတာကိုသိလာတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ၂၀၁၉ မှာပြန်လျှောက်ဖို့ interviewer ကပြောပေမဲ့ အဲနှစ်က မလျှောက်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ blog တွေ talk တွေတော့ ဆက်ရေး/ပြော ဖြစ်တယ်။ ၂၀၂၀ ရောက်တော့ mVoter 2020 ရေးပြီးတဲ့နောက်မှာ ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော် ယုံကြည်မှုတွေပြန်ရလာတယ်။
-Colson Baker (MGK)
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပထမဆုံး GDE ေပါ်လာတယ်။ ငါတို့လိုလူတွေထဲက တစ်ယောက်ကရရင် ငါလည်း ရနိုင်တယ်ဆိုပြီး အားတက်မိတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း အရင်ရှိခဲ့တဲ့ အိပ်မက်ကို ပြန်အသက်သွင်းလိုကြောင်း ပြန်လျှောက်ကြည့်ချင်တဲ့ အကြောင်း အစ်မကို ပြောကြည့်တယ်။ သူ့အကူအညီနဲ့ ကျွန်တော် APAC က Googler တစ်ယောက်နဲ့ အဆက်အသွယ်ရခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် Form ဖြည့်တော့ သူကကြည့်ပေးတယ်၊ ပြီးတော့ နောက် လေး ငါး ခြောက်လလောက် လစဥ် community contribution လုပ်၊ ပြီးရင် သူ့ကိုလာပြဆိုပြီး ပြောတယ်။ ကျွန်တော် အဲ့တုန်းက November ကနဲ့တူတယ်။ ကျွန်တော် အရင်က ရေးချင်မှထရေးတဲ့အကျင့်ကို ပြင်ပြီး တစ်လ blog post တစ်ခု ပုံမှန်ရအောင်ရေးတဲ့ အကျင့်စလုပ်ဖြစ်တယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ အာဏာလုသွားတဲ့ နေ့မတိုင်ခင်တစ်ရက်က ကျွန်တော့် ဘဝမှာ reach အများဆုံးရတဲ့ blog post ကို ProAndroidDev မှာစတင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေ့။ ကျွန်တော် အရမ်းပျော်ပြီးနိုးလာရမဲ့အချိန်မှာ ဘဝကြီးက ဇောက်ထိုးစဖြစ်သွားတာပဲ။ နောက် ၃ လလောက်ထိ ကျွန်တော် ဘာကိုမှ အာရုံစိုက်မရဘူး။ Blog Post လည်းဆက်မရေးဖြစ်၊ Googler နဲ့လည်း အဆက်အသွယ်လည်းပြတ်သွားတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ May လမှာ ကျွန်တော် ထိုင်းက အလုပ်တစ်ခုရပြီး Work permit နဲ့ နေခွင့်ရတယ်။ June လ ထိုင်းရောက်တော့ စိတ်ပြန်စုစည်းလို့ရလာတဲ့အချိန် အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတဲ့ Googler နဲ့ ပြန်စကားပြောဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဒီကြားထဲ ဘာလို့ community contribution ရပ်သွားတာလဲ ရှင်းပြတော့ သူကလည်း နားလည်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ အင်တာဗျူးပထမအဆင့် စလုပ်ဖို့ပြောပေးတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲ့အင်တာဗျူးဖြေတုန်းက ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ဂိနေတဲ့အချိန်ကြီး ကျွန်တော် ခေါင်းထဲ လည်နေတာ ဘာတွေဖြေမိမှန်းတောင် သေချာမမှတ်မိဘူး။ မှတ်မိတာဆိုလို့ သူမေးတဲ့ မေးခွန်းနှစ်ခုလောက်ကို "ကျွန်တော် မသိဘူး။" ဆိုပြီး ဒဲ့တွေဖြေနေတာပဲ။ ဘုရားမလို့ ကံကောင်းချင်တော့ နောက်တစ်ဆင့်ထိပါသွားတယ်။ ဒီတစ်ဆင့်ကတော့ ကျွန်တော်တော်တော်လေး အခြေအနေကောင်းတယ်။ ဖြေပြီးသွားတော့ ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ ရမှာပါလို့ပဲတွေးထားတယ်။ တစ်ပတ်လောက်အကြာ အောက်တိုဘာ ၂၇၊ ၂၀၂၁ မှာ Google ကနေပြီး ကျွန်တော့်ကို GDE အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြောင်း စာရခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်စာရတော့ မျက်ရည်တွေဝဲပြီး အခန်းထဲမှာ စောင့်ကြောင့်လေးထိုင်ပြီး ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး။ ငါ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြိုးစားခဲ့တာတွေ နောက်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုပြီး ပျော်နေမိတယ်။ ဒီစာရေးတဲ့အချိန်ထိလည်း ယုံရခက်နေတုန်းပါပဲ။
It's time like when you go up on the stage, you represent your country for something. You get the prize. That's the amount of satisfaction and achievement nothing else can give you. It's something I definitely don't regert ever doing
- Benedict Lim Han Yong (hyhy)
GDE ဖြစ်သွားလို့ ဘာထူးလဲဆိုရင်တော့ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်မှာ အသိအမှတ် ပြုခံရတာလေးတစ်ခုပါပဲ။ အရင်ကလဲ blog post တွေရေး၊ talk တွေပြောနေတာ။ အားရင်အားသလိုလည်း ဆက်ပြီးရေးသွားမှာပါပဲ။ တစ်ခုသိခဲ့ရတာလေးတစ်ခုက Google Developer Advocate ကိုယ်တိုင်က မြန်မာလိုများများ ဆက်ရေးပေးပါဆိုပြီး ပြောတာ အရမ်းဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းတယ်။ ဆိုတော့နောက်လည်း မြန်မာလိုတွေရေးပေးမှာပါ။
Mom & Dad, I made it!
If you're developing Android apps, you might often wonder how does our PC communicate with the Android devices when we debug. Well, the answer is through the Android Debug Bridge, adb for short.…